राष्ट्रपतिबाट अर्को सरकार गठनकाे अनुमति पाउने अपेक्षासहित प्रधानमन्त्रीले दिए राजिनामा - Nepalese Times
यस्ता छन् जीवन बदल्ने १० महत्वपूर्ण भनाइहरु 1 दिन अघि
यस्ता छन् नेल्सन मण्डेलाका जीवन बदल्ने भनाइहरू3दिन अघि
पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य फेरि बढ्यो, कति पुग्यो ?3दिन अघि
डोजरले ठक्कर दिएपछि पैदलयात्रीलाई खाल्डो खनेर पुरियो, स्थानीयले डोजरमा आगो लगाईदिए3दिन अघि
पुरातत्त्वविद्‌ले फेला पारे दुई हजार वर्ष पुरानो रथ, हेर्नुहोस् यस्तो छ3दिन अघि
नेपालीलाई खुसीकाे खबर ! सबैभन्दा सस्ताे जोन्सन एण्ड जोन्सनको कोरोना खोपलाई अनुमती, एक चोटी लगाए पुग्ने4दिन अघि
भारतमा अहिलेसम्म कति जनाले लगाए कोरोना खोप ?5दिन अघि
भर्खरै काठमाडौंमा फेरि बर्ड फ्लु भेटियाे, नियन्त्रण गर्न किन सकिएन ?6दिन अघि
राष्ट्रपतिबाट अर्को सरकार गठनकाे अनुमति पाउने अपेक्षासहित प्रधानमन्त्रीले दिए राजिनामा
नेप्लिज संवाददाता १३ माघ २०७७, मंगलवार १६:३८ (1 महिना अघि) १३६ जनाले पढ़िसके
काठमाडौं । कोरोना भाइरसको संक्रमणले विश्व नै आक्रान्त बनिरहेको छ । विभिन्न देशमा कोरोना संक्रमण नियन्त्रण बाहिर गएको छ । कोरोना भाइरसको संक्रमणका कारण सबैभन्दा धेरै प्रभाव इटलीमा पर्यो । इटलीमा २४ लाख ७५ हजारभन्दा धेरै व्यक्तिहरु कोरोनाबाट संक्रमित भएका छन् । त्यसमध्ये झण्डै ८६ हजारले ज्यान गुमाएका छन् । कोरोना संक्रमित देशहरुमध्ये आठौँ स्थानमा रहेको इटलीका प्रधानमन्त्री जुजेप्पे कोन्टेले आफूले महामारी नियन्त्रण गर्न नसकेको भन्दा पदबाट बाहिरिएका छन् ।
कोरोनाभाइरस महामारी नियन्त्रण गर्न नसकेको भन्दै आलोचना भएपछि इटलीका प्रधानमन्त्रीले रा जी ना मा दिएका हुन् । सिनेटमा स्पष्ट बहुमत हात पार्न नसकेका प्रधानमन्त्री कोन्टेले राष्ट्रपतिबाट अर्को बलियो सरकार गठन गर्ने अनुमति पाउने अपेक्षा गरेका छन्। तर त्यसो हुन सकेन भने अरू कसैले नयाँ सरकार गठन गर्न पाउनेछन् र नयाँ निर्वाचन हुन सक्छ।
कोन्टेले सन् २०१८ देखि दुई पटक गठबन्धन सरकारको नेतृत्व गरेका छन्। गत साता उनी तल्लो सदनमा अविश्वासको प्रस्तावबाट जोगिन सफल भएका थिए। सिनेटमा उनले आफ्नो पक्षमा समर्थन जुटाउन सके पनि स्पष्ट बहुमत भने नपाएका बीबीसीले जनाएको छ ।
छोरी भगाएर भारतमा लगेर बेपत्ता, सक्दो सेयर गरेर सहयाेग गरिदिन बुबाकाे आग्रह
कृषि व्यवसाय गर्ने युवाले धितो नै नराखी ऋण पाउने, कर्जाका पाउन यसो गर्नुस्
जसले प्रधानमन्त्री दिन्छ म उसैलाई समर्थन गर्छु–शेरबहादुर देउवा
खेर गएको जमीनमा ‘घीउ फल’ लगाएर यसरी बन्नुहाेस् रातारात कराेडपति
एउटै गाउँमा भेटिए लाेपाेन्मुख ८८ प्रजातिका चरा
यस्ता छन् नेल्सन मण्डेलाका जीवन बदल्ने भनाइहरू
कालिन्चोक भगवतीको दर्शन गर्दै हेरौँ आजको राशिफल
डोजरले ठक्कर दिएपछि पैदलयात्रीलाई खाल्डो खनेर पुरियो, स्थानीयले डोजरमा आगो लगाईदिए
गौतमबुद्ध रंगशाला बनाउन धुर्मुस सुन्तलीले ११ करोड रुपैयाँको उधारो सामान किने
उमेर नपुगेका किशोरीको पेटमा बच्चा बस्ने क्रम बढ्यो
महान श्रीमान बिनोद र अनिता खडकाको पहिलो गीतले सारा नेपालीलाई रुवायो(हेर्नुहोस् भिडियोमा)